Somali News 06.30.21 | KWIT
Sharci dejinta Iowa ayaa meel mariyey sharci sanadkii 2019 kaas oo sheegaya in ururada bixiya ilmo soo ridka aysan heli doonin lacag lagu bixiyo barnaamijyada noocaas ah.
Gudoomiyaha gobolka Reynolds ayaa sheegay in go'aanka uu dirayo bayaan adag oo ah in canshuur bixiyeyaasha doolarka aysan maalgelin ilmo iska soo ridka.
Planned Parenthood waxay leedahay go’aanka maxkamada wuxuu dhabar jab weyn ku yahay caafimaadka bulshada.
Waaxda Caafimaadka ee Dakota Dakota waxay xaqiijineysaa in noocyada Delta ee COVID-19 laga helay Koonfurta Dakota.
Kala duwanaanta ayaa mar horeba lagu xaqiijiyay labada Iowa iyo Nebraska.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay muujineysaa hal dhimasho oo dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo 210 xaaladood oo cusub. Websaytka dawada coronavirus ayaa muujinaya 6,134 dhimasho tan iyo bilowgii cudurka safka, 230 qof ayaa ku dhimatay Gobolka Woodbury.
Hogaamiyaasha Caafimaadka Degmada Siouxland waxay noqon doonaan marshalleyaasha habeenka berri ah ee Mardi Gras Parade. Dhacdadu waxay bilaabmaysaa Sabtida xafladaha Park. Abaabulayaashu waxay yiraahdeen ragga waxaa loo xushay inay u dabaaldegaan shaqadii adkayd iyo dadaalka ay muujiyeen dhammaan Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland intii lagu jiray aafada. Bandhiga ayaa bilaabmaya 6-da maqribnimo. berri magaalada Sioux City.